NJEHIE 1671 NA ITUNES: IHE Ị GA-EME - ITUNES - 2019
Ụzọ iji dozie njehie 1671
Ruo ihe karịrị otu narị afọ, foto ndị monochrome nọ na ya. Ruo ugbua, oji gbara oji na oji di nma n'etiti ndi okachamara na ndi amateur. Iji mee ka eserese eserese ahụ, ọ dị mkpa iji wepụ ihe ọmụma gbasara agba agba. Ọrụ ahụ nwere ike ịnagide ọrụ ndị na-ewu ewu n'Ịntanet.
Ebe maka igbanwe agba foto n'ime oji na oji
Nnukwu uru nke saịtị ndị dị na software dị mfe maka ojiji. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha anaghị adaba maka ebumnuche ndị ọkachamara, ma ọ ga-adị mkpa maka idozi nsogbu ahụ.
Usoro 1: IMGonline
IMGOnline bụ ọrụ ntanetịime ntanetịime maka usoro BMP, GIF, JPEG, PNG na TIFF. Mgbe ị na-echekwa foto ndị a gbanyere mkpọrọgwụ, ị nwere ike ịhọrọ mma na ntinye ntanetị. Ọ bụ ụzọ kachasị mfe na nke kachasị mfe iji tinye ihe osise na oji na foto.
Gaa na IMGonline ọrụ
Pịa bọtịnụ ahụ "Họrọ faịlụ" mgbe ị na-agagharị na peeji nke saịtị ahụ.
Họrọ oyiyi achọrọ maka edezi na pịa "Meghee" n'otu window.
Tinye uru site na 1 ruo 100 na akara kwesịrị ekwesị iji họrọ àgwà faịlụ ihe mmepụta.
Bulite foto site na iji bọtịnụ "Gbaa ihe oyiyi a gbanyere mkpọrọgwụ".
Ọrụ ahụ ga-amalite nbudata akpaka. Na Google Chrome, faịlụ a ebudatara ga-ele ihe dịka nke a:
Usoro 2: Croper
Nchịkọta foto ntanetị na nkwado maka ọtụtụ mmepụta na arụmọrụ maka nhazi oyiyi. Ọ bara ezigbo uru mgbe ị na-eji otu ngwaọrụ ahụ ugboro ugboro, nke a na-egosipụta na-akpaghị aka na ntinye ngwaọrụ ngwa ngwa.
Gaa na Croper ọrụ
Mepee tab "Faịlụ"wee pịa ihe "Ibu ibu si na disk".
Pịa "Họrọ faịlụ" na ibe na-egosi.
Họrọ oyiyi ịhazi ma kwenye na bọtịnụ ahụ. "Meghee".
Ziga foto ahụ na ọrụ site na ịpị Download.
Mepee tab "Ọrụ"wee mechie ihe "Dezie" ma họrọ mmetụta "Gbasara b / w".
Mgbe ihe omume gara aga, ngwá ọrụ eji eme ihe ga-apụta na oghere ngwa ngwa n'elu. Pịa ya iji mee ihe.
Ọ bụrụ na enwee ike imetụta ya na foto a, ọ ga-agba ọchịchịrị ma chaa ọcha na windo ihuenyo. Ọ dị ka nke a:
Mepee menu "Faịlụ" wee pịa "Chekwa na Disk".
Weghachite foto nke okirikiri iji bọtịnụ "Download faịlụ".
Mgbe emechara usoro a, akara ọhụrụ ga-apụta na nchịkọta nchịkọta ngwa ngwa:
Usoro 3: Photoshop Online
Ihe di elu nke nchịkọta ntaneti, nke nwere ọrụ di iche iche nke usoro Adobe Adobe. N'etiti ha, enwere ike ịhazigharị ụcha agba, nchapụta, iche na ihe ndị ọzọ. I nwekwara ike na-arụ ọrụ na faịlụ ebugo na ígwé ojii ma ọ bụ netwọk mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, Facebook.
Gaa na Photoshop Online
Na obere windo dị n'etiti etiti peeji nke, họrọ "Bulite foto site na kọmputa".
Họrọ faịlụ na diski na pịa "Meghee".
Meghee ihe menu "Ndozi" ma pịa mmetụta "Ọcha".
Site ngwa ngwa nke ngwá ọrụ ahụ, onyinyo gị ga - enweta oji na oji:
Na n'elu mmanya, họrọ "Njikwa"wee pịa "Chekwa".
Dee otutu ị chọrọ: aha faịlụ, usoro ya, mma, wee pịa "Ee" na ala nke windo ahụ.
Malite nbudata site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Chekwa".
Usoro 4: Holla
Ọrụ oge ntanetị a na-ewu ewu ugbu a, na-akwado ndị editọ foto Pixlr na Aviary. Usoro a ga-atụle nhọrọ nke abụọ, ebe ọ bụ na a na-ewere ya dị ka ihe kacha mma. N'ụlọ agha nke saịtị ahụ, e nwere ihe karịrị mmadụ iri na abụọ uru bara uru.
Gaa na-eje ozi Holla
Pịa "Họrọ faịlụ" na isi peeji nke ọrụ ahụ.
Pịa na oyiyi ịhazi ya, wee pịazie ya. "Meghee".
Pịa ihe Download.
Họrọ site na nchịkọta foto ntanetị "Aviary".
Na toolbar, pịa na tile labeled "Mmetụta".
Pịgharịa gaa na ala nke ndepụta iji chọta onye ziri ezi na akụ.
Họrọ mmetụta "B & W"site na ịpị ya na bọtịnụ òké aka ekpe.
Ọ bụrụ na ihe niile gara nke ọma, na nlele ihuenyo foto gị ga-ele anya na oji na ọcha:
Kwenye na mmetụta ahụ na-ejide ihe "OK".
Mezue ihe oyiyi site na ịpị "Emere".
Pịa "Download Image".
Download ga-amalite na akpaghị aka na ọnọdụ nchọgharị.
Usoro 5: Editor.Pho.to
Onye nchịkọta foto, nke nwere ike ịrụ ọtụtụ arụmọrụ ntanetị n'ịntanetị. Naanị otu n'ime saịtị ndị ị nwere ike ịhazigharị oke nke ike nke ngwakọta nke mmetụta ahọrọ. Enwere ike iji ọrụ igwe ojii rụọ ọrụ Dropbox, netwọk mmekọrịta mmadụ Facebook, Twitter na Google+.
Gaa na Editor.Pho.to ọrụ
Na ibe isi, pịa "Malite na-edezi".
Pịa bọtịnụ nke na-egosi. "Site na kọmputa".
Họrọ faịlụ ka ịhazi ma pịa "Meghee".
Pịa ngwá ọrụ "Mmetụta" na nkwekọ kwekọrọ na ekpe. Ọ dị ka nke a:
N'ime nhọrọ ndị na-egosi, họrọ taịl ahụ na edemede ahụ "Black na White".
Choo mmetụta dị ike site na iji ihe mmịfe ahụ egosipụtara na nseta ihuenyo n'okpuru, wee pịa "Tinye".
Pịa "Zọpụta na ịkekọrịta" na ala nke ibe.
Pịa bọtịnụ ahụ "Download".
Chere ruo mgbe njedebe nke nkedo akpado nke oyiyi ahụ na ọnọdụ nchọgharị.
Iji gbanwee foto foto na-acha ọcha na oji, ọ bụ iji tinye akara kwekọrọ na-eji ọrụ ọ bụla dị mma ma chekwaa nsonaazụ na kọmputa. Imirikiti nke saịtị ndị a nyochare na-arụ ọrụ na ebe nchekwa igwe ojii na-elekọta mmadụ na netwọk mmekọrịta, nke a na-enyekwa aka n'ịkwado faịlụ.
Otu esi esi na Yandex.Mail
Mee ntinye data site na gam akporo na iOS
Gbanyụọ nchekwa igwe ojii OneDrive na Windows 10
Kọmputa gbanwee ruo ogologo oge. Ihe ị ga-eme
Kedu esi emeghe ọdụ ụgbọ mmiri na d-link dir 300 (330) router?
Iji mee ụdị dị iche iche na ọdịnaya nke sel sel Excel, ha ga-ebu ụzọ họrọ. Maka nzube ndị a, usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ ngwaọrụ. Nke mbụ, nke a dị iche iche bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị dị iche iche nke mkpụrụ ndụ (oghere, ahịrị, ogidi), nakwa mkpa ọ dị maka akara ihe ndị kwekọrọ na ọnọdụ a kapịrị ọnụ. GụKwuo
Egwuregwu iri kacha njọ na 2018
Nchọpụta dị elu nke dabeere na engine Firefox